FAREWELL TO LITTLE YUE YUE,THERE ARE NO CAR IN HAVEN - eikoko's JimdoPage!
FAREWELL TO LITTLE YUE YUE,THERE ARE NO CAR IN HAVEN
(ကားတွေမရှိတဲ့ ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာ ယွီယွီလေး အေးချမ်းစွာ အနားယူပါ)
ယနေ့ အင်တာနက်မှာ အထူး လူသိများတဲ့2နှစ်သမီး အရွယ် တရုတ်ပြည် နယ်တောင်ပိုင်း Foshan, Guangdong province က Weng Yue လေးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ နံနက်မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ် ။အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်း ဘင်ကား2ကြိမ်ကြိတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ခလေးမလေး Weng Yue ဟာ လူ 18 ယောက်ရဲ့ ဥပေက္ခာပြုခြင်းကို သွေးအိုင်ထဲမှာ လူပ်ရှားရင်းငိုကြွေးရင်း နဲ့ ကားကြိတ်ခံရပြီး တစ်ပတ်တိတိမှာ အစာအိမ်သွေးလွန် ခြင်းနဲ့ ခန္ဒာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းများ ပျက်စီး ခြင်း စတဲ့ အဓိကအကြောင်းရာတွေကြောင့်သေ ဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ။
ပထမဆုံး ဒီဗွီဒီယိုကို အင်တာနက်ပေါ်တင်ခဲ့တဲ့ တရုတ်ပြည်က နာမည်ကျော် ဘလော့တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Microbloggr on Sina's weibo က
ကားတွေမရှိတဲ့ ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာ ယွီယွီလေး အေးချမ်းစွာ အနားယူပါ
ရယ်လို့ဂရုဏာ ၊ ဒေါသ ၊ ခံပြင်းစိတ် ၊ တွေနဲ့ လူဦးရေများစွာ ဟာ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ် ။
အထက်ပါ မှတ်တမ်းကတော်တော်များများသိပြီး ၊ ကြည့်ပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း ယွီယွီ လေးဟာ ဗင်ကား2စီးတိတိအကြိတ်ခံရပေမယ့် အသက်မသေဆုံးသေးပဲ သွေအိုင်ထဲမှာ လူးလိမ့်အော်ဟစ်နေခဲ့ရပေမယ့်လူတွေရဲ့ 18 ကြိမ်တိတိ ရှောင်ခွာသွားမှု့တွေကြောင့် အရွယ်နဲ့မမျှတဲ့ ဝေဒနာများနဲ့အတူ အသက်စွန်သွားခဲ့ရပါတယ် ။
အလုပ်သမား မိဘနှစ်ပါးကနေ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ထိုခလေးမ ယွီယွီ ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ကမ္ဘာက လူသားတွေ တောက်တစ်ခေါက်ခေါက် ၊ စုတ်တစ်သတ်သတ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ထို ဗွီဒီယိုကို ကုန်မာပစ္စည်းဆိုင်ရဲ့ လုံခြုံရေး ကင်မရာမှတဆင့် ကမ္ဘာသိအောင် အင်တာနက်ကနေ လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက် မှာ တရုတ်လူ့အသိုင်းဝိုင်းကို " ဘယ်လို ယာဉ်ကျေးမှု့ ၊ ဘယ်လို မေတ္တာတရား ၊ဘယ်လိုလှု့ဘောင်တွေနဲ့တည်ဆောက်ထားခဲ့ကြသလဲ " ဆိုတဲ့ မေးခွန်းက သိန်းနဲ့ချီတဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာ မေးမြန်းခြင်းကိုခံခဲ့ရပါပြီ။
ထိုအဖြစ်ပျက် ဖြစ်ပွားတဲ့ southern city of Guangzhou ကလူဦးရေ 10000 ကျော်ကို နှလုံးသားအေးစက်နေသော လူသားများရယ်လို့ ကင်ပွန်းတပ်နေကြပါပြီ ။ ထိုကုန်မာဈေးတန်းထဲမှာ ရှိနေတဲ့ လူ 200 ရဲ့ လက်တွေကိုတော့ ထံကျင်နေသောလက်ပိုင်ရှင်များရယ်လို့ လှောင်ပြောင်ခဲ့ကြပါတယ် ။
နောက်ဆုံး အမှိုက်လိုက်ကောက်စားတဲ့ အမျိုးသမီးကမှ ခလေးလေးကို လမ်းဘေးခေါ်ရွေ့တဲ့နေရာမှာ ခလေးဟာ ခါးကြိုးခေါက်ကျနေတာတွေ့လို့ အော်ဟစ်အကူညီတောင်းခဲ့၍သာ မိခင်မှပြေးလာပြီး ခလေးကိုဆေးရုံပို့ဖို့စတင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါဟာ အင်မတန် လှုမှု့ကျင့်ဝတ်မညီမျှမှု့တစ်ခုဆိုတာ ယနေ့တရုတ်ပြည်က မျက်လွှာလေးချပြီး ဖြေရှင်းနေတဲ့ ၀န်ကြီးများအတွက်အရှက်ရစရာတွေ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ် ။
ဒါကိုတောင် ထိုပတ်ဝန်းကျင်က ယွီယွီလေးရဲ့ မိခင်ကိုမသိကြပဲ သူမရှေ့မှာတင်2နှစ်သားယောက်ကျားလေး ဘိလပ်မြေသယ်ကားကြီးကြိတ်လို့ သေရှာပြီရယ်လို့ မှားယွင်းပြောဆိုနေတာကိုခလေးမိခင်က သတင်းဌာနတွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ် ။
In this photo taken Tuesday Oct. 18, 2011, journalists surround the unidentified parents ofatwo-year-old girl identified as Wang Yue inahospital in Guangzhou in south China's Guangdong province. A video showing Wang Yue being struck twice by vans and then ignored by passers-by is sparking outrage in China and prompting soul-searching over why people didn't help the child. (AP Photo) CHINA OUT AP
ယွီယွီလေးရဲ့ အဖြစ်ပျက်အင်တာနက်ကနေတဆင့် ဟိုးလေးတစ်ကျော်ဖြစ်ပြီးကာမှ5နှစ်သားတစ်ယောက်ကို ကားတိုက်ပြေးတာတွေ ၊တစ်နှစ်သားလေးခြေကြိုးတဲ့အထိ ကားကြိတ်တာတွေ စတဲ့ ခလေးတွေကို ဥပေက္ခာပြုမှု့တွေ အင်တာနက်မှာ ပျံနှံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ် ။ ထိုအဖြစ်ပျက်တွေဟာ ယွီယွီလေးနေထိုင်တဲ့ ခရိုင်တစ်ခုတည်းမှ ဖြစ်ခဲ့တာတွေ ဖြစ်ပြီး ။ အခြားဒေသတွေမှာလည်း အလားတူများစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ က ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ် ။
မလေးရှားထုတ် The Star သတင်းစာက ယနေ့ရေးသားဖော်ပြမှု့များထဲမှာ တရုတ်ပြည်က မည်းညစ်နေသော လူနေမှု့စရိုက်ဆိုတဲ့ အလွန်ပြင်းထန်းသော အသုံးအနှံးကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်လွှားက သတင်းစာများကတော့ ယိုယွင်းနေသော လူနေမှု့ရယ်လို့ အမည်တပ်ခဲ့တဲ့ ထို ကားတိုက်မှု့ကို ဧဒင်အဖွဲ့သားတွေသိအောင် ယနေ့ ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
Cheap Shox Shoes (Monday, 26 December 2011 02:21)
Cheap Designer Wallets (Wednesday, 01 February 2012 03:06)
Cheap Ray Ban Sunglasses (Monday, 27 February 2012 02:16)
juicy Couture Swimwear (Friday, 16 March 2012 02:34)
The weather improvedalot, this several day warm sun shine on the earth, let the thicker. Spring isatime of germinal, flowers and trees start to showagree
Laguna Beach Jeans Cheap (Friday, 23 March 2012 03:29)
Laguna Beach Jeans Cheap
Ondra (Tuesday, 03 April 2012 21:02)
Nike NFL Jerseys China (Monday, 17 September 2012 22:38)
http://www.nfljerseysmallchina.com Buy Cheap NFL Jerseys
http://www.notjustnfljerseys.com Cheap NFL Jerseys China
http://www.nfljerseysmallchina.com Cheap NFL Jerseys Outlet
http://www.notjustnfljerseys.com 2012 NFL Jerseys Online Sale
http://www.nfljerseysmallchina.com Nike NFL Jerseys From China
http://www.notjustnfljerseys.com Wholesale Cheap NFL Jerseys
mens linen suit (Tuesday, 30 October 2012 23:49)
buytadalafilonline (Wednesday, 07 November 2012 06:53)
Tory Burch Outlet (Thursday, 29 November 2012 00:42)
not one could be referred to the Echinocactus Eyriesu.s The history of the plant,
紅蜘蛛 (Monday, 05 August 2013 01:27)
巨人倍増 (Monday, 05 August 2013 01:29)
威哥王 (Monday, 05 August 2013 01:34)
d10媚薬 (Monday, 05 August 2013 01:36)
夜狼神 (Friday, 21 February 2014 01:30)
夜狼神 (Friday, 21 February 2014)
wróżka na telefon (Saturday, 21 January 2017 05:00)